Ukuhamba nokhubazeko EYurophu Made Easy | Gcina A Isitimela
ekhaya > Travel Europe > Ukuhamba nokhubazeko EYurophu Made Easy
Kutheni na ke ngololiwe sihamba? umdla Train uya kuthoba, esebenzayo kunye inikeza i inkalo zentlalo ukuba ezinye iindlela zothutho nje awukwazi ayifani. kunjalo, babehamba onokukhubazeka kungaba nzima kwabanye. Oku akuthethi ukuba awungekhe wonwabe, nakuba. Eli nqaku inika iindawo ezithile ezingundoqo ekufuneka xa uhlela yakho uhambo ngololiwe ngoko uhamba nokhubazeko eYurophu kufaka xinzelelo.
Nangona kukho ngokuqinisekileyo eminye imingeni ungeno, into esisiseko kukuba uphando Xa nisenza, i ifikeleleke yaye fun uhambo yakho iya kuba! Umzekelo; Ngaba uyazi ukuba amanxuwa saseHerculaneum kaThixo malunga twatse yasePompeii, kodwa wheelchairs-friendly? Nokuba abakhweli iza abakhubazekileyo musa ukuba sithathe “indlela imbongolo” i emaweni xa utyelela isiqithi yesiGrike Santorini? akadingi iholide yakho ukuba umzabalazo - ukwenza umsebenzi wakho kwaye uhambo wakho uzaliswe indawo hotele ukufikelela ngokupheleleyo, iindlela ezifikelelekayo phakathi zifikeleleke abakhenkethi iindawo ezinika umdla zotyelelo, nemangalisayo lula amava zokuhamba.
Loluphi uLoliwe ekufuneka uluthathe kuGcina-A-Qeqesha ukuba uhamba nokhubazeko?
Ukuba une iinketho ezininzi ezifumanekayo kuwe (amanye amazwe inkqubo kaloliwe enye kuphela), zama ukukhetha yenethiwekhi okunika iinkonzo ezininzi ezilungiselelwe Ukuhamba yakho nge iimfuno yokukhubazeka. angala; uncedo Ukukhwela kwaye ziyafikeleleka iimoto olele. Zangasese kufuneka zibe nkulu ngokwaneleyo ukulungiselela wena esinamavili bakho kunye ndingaphelekwanga okanye umlindi. Njengesiqhelo, ukubuza imibuzo ezininzi kangangoko unako kwangaphambili ukuphepha izimanga ezingeyomfuneko!
Ukuhamba Special yinkonzo ukukhubazeka inokwahluka ukusuka kwenye indawo ukuya kwenye, kuxhomekeke kwiindlela ezininzi; zimoto kwi uloliwe yakho ethile, izakhiwo kule ezahlukeneyo izitishi kwindlela yakho, kunye nomgaqo-nkqubo wakho wokuphatha ngokufikeleleka.
Cologne ukuya eBrussels Uqeqesha
Vavanya itikiti lakho kunye nohambo ngononophelo wakuba nje ufumene. Qinisekisa ukuba bakholisekile imigaqo-nkqubo kunye namalungiselelo ukuze ningabi bamangaliswe kwi stopovers zakho ezahlukeneyo (ingakumbi xa uhambela phesheya).
Ezithambekileyo kunye Limits Weight
Ukufumana nangaphandle uloliwe imbeko yinxalenye ebalulekileyo uhambo. ukuqinisekisa ukuhamba kunye ukufika izitishi zakho baxhotyiswa amaqonga ekwinqanaba eliphezulu okanye asuse ngesitulo. Oku kuza kwenza kube lula kakhulu ukuba akhwele nangaphandle uloliwe lwakho ngexesha Ukuhamba nokhubazeko.
EMilan ukuya Pompei Uqeqesha
UFlorence Pompei Uqeqesha
Salerno ku ePompeii Uqeqesha
Uninzi abathwali baya kwenza konke okusemandleni abo ukuze ukuhlalisa abantu abahamba kunye nokhubazeko isakhono imithwalo extra ukuze ukuba (umzk. isihlalo, amatanki oxygen, njl). Ukuba uyazi ukuba uza kufuneka iimfuno umthwalo ezongezelelweyo, ukuba inkampani yakho wazi kwangaphambili.
Hlala kwezona ndawo olufikelelekayo wedolophu. Le yenye yezona ndawo zinzima ekucwangciseni uhambo lwakho lukaloliwe ngelixa uhamba nokhubazeko. Inokuba bafumana kwihotele enkulu zifikeleleke, kodwa uya kufumana xa uhamba / senze ucango lwangaphambili? Ingaba kukho iinduli ngezinyuko kuzo zonke iindlela? kuya kufuneka ukuba ziqhube phezu cobblestones? Ingaba kukho zokudlela zifikeleleke kufutshane? Kubalulekile ukuba uphando ebumelwaneni yehotele. Ungasebenzisa Google Maps Street View ukuze ufumane lowo yelizwe, ngoko email ehotele ngemibuzo yakho.
Ekubeni yonke admin phandle indlela, ukhumbule ukuthatha ixesha lokuphumla yaye onwabele adventure. Thatha ixesha ukuhlangabezana nabo abakhweli, kondela ngefestile, okanye uvele elilahlekileyo ngenxa kancinane ngexesha njengoko uhamba indlela abaninzi abaye ngaphambi.
Unga-odola amatikiti etreyini yakho phakathi oololiwe fastest eYurophu on Gcina-A-Train Phantse yonke indawo afuna ngasentla 3 imizuzu, e angamanani rates itikiti uloliwe sesikhululekile iimali ukubhukisha owakhe!
Ingaba ufuna kuzakulungisa post yethu blog kwi sayithi yakho?, ngoku nqakraza apha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftraveling-disability-europe%2F%0A%3Flang%3Dxh- (Skrolela ezantsi ukubona Code lungisela)
#ukukhubazeka #isihlalo train Travel uhambo ngololiwe traveltips
Festivals Best eYurophu Apho uzifune
Qeqesha uHambo lwaseHungary, Uloliwe eSpain, Qeqesha uKhenketho e-UK, Travel Europe
Kutheni ke emnandi Train Travel EYurophu?
Qeqesha uhambo eJamani, Uloliwe eSwitzerland, Travel Europe